खैरो हेरोइनको लतमा फँस्दा १५ वर्ष जेल परेकी युवतीको जेल डायरी’थ्याङ्क गड, मलाई जेलमा पार्यौ !’ – Korea Pati
March 12, 2019 LeaveaComment on खैरो हेरोइनको लतमा फँस्दा १५ वर्ष जेल परेकी युवतीको जेल डायरी’थ्याङ्क गड, मलाई जेलमा पार्यौ !’
जेलका महिलाको कथा खोज्ने क्रममा केन्द्रीय कारागारको महिला जेलमा फेला परिन् सरिता श्रेष्ठ (नाम परिर्वतन) जो नौ वर्षदेखि त्यहीँ थिइन् । २४ वर्षको उमेरमा जेल परेकोमा उनमा पश्चाताप कम, खुसी बढी देखियो । जेल पर्दा खुसी ! उनीतिरै ध्यान तानियो ।
२०६७ पुस २९ मा जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेशमा उनी केन्द्रीय कारागार महिला जेलमा आइपुगेकी रहिछन् । अभियोग थियो, दुई सय ग्राम खैरो हिरोइन बोक्नु । खैरो हेरोइन ओसारपसारमा संलग्न रहेको अभियोगमा अदालतबाट उनीविरुद्ध १५ वर्ष कैदको सजाय फैसला भइसकेको छ । सजाय काट्न र जेल जीवनबाट स्वतन्त्र हुन अझै ६ वर्ष बाँकी छ ।
आखिर उनी किन खुसी छिन् जेल परेर ? बाँकी कथा उनीबाटैः
मेरो घर काठमाडौँको बालाजुमा हो । परिवार सानो थियो बाबा, मामु, म भाइ र बहिनी थिई । बाबाको व्यवसाय थियो, मामु घरमै बस्नुहुन्थ्यो । हामीलाई एकदमै प्यारो गरेर हुर्काउनु भएको थियो ।
म घरकी जेठी छोरी । बाबाले साथी जस्तै व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो तर बेलाबेला ‘नानी नराम्रो नगर है, पछि दुःख पाइन्छ’ भन्नुहुन्थ्यो । त्यो बेला बुबासँग खुब रिस उठ्थ्यो । स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेझैँ लाग्थ्यो । बुबाले व्यवसायसम्बन्धी कुरा गर्न खोज्दा उहाँको नजिकै पर्दिनथेँ । तर असाध्यै माया गर्नुहुन्थ्यो । घुम्न रोकटोक थिएन, पैसा जति मागे पनि पाइन्थ्यो ।
घर नजिकैको केटासँग मेरो अफेयर्स शुरु भइसकेको थियो । हाम्रो प्रेमसम्बन्धबारे घरमा चाल पाएपछि उसैसँग विवाह गरेँ ….( उनी केही बेर टोलाइन् । आँखा भरिए उनका । केही बेर बोल्नै सकिनन् ) ।
म अहिले त्यो केटाको बारे केही पनि भन्दिनँ । उसको मेरो डिभोर्स भइसकेको छ ।
बीचैमा पढाइ छाडेर विवाह गरे पनि मलाई खर्च चाहिएको बेला बुबाले दिन छोड्नुभएन । छोरीले फेरि पढोस् भनेर धेरै कोसिस पनि गर्नुभयो तर मैले नै उहाँको सपनामा लात हानेर विवाह गरेँ । सानैमा विवाह गरेकीले होला, सम्बन्ध टिक्न सकेन । म माइतैमा आएर बस्न थालेँ ।
घरकाले भनेको नमानी कच्चा उमेरमै विवाह गर्न पुगेँ तर सम्बन्ध राम्रो हुन सकेन । यसले तनाव दियो । त्यसपछि शुरु भयो मेरो ड्रग्स यात्रा । त्यो बेला मेरो उमेर २१ को थियो ।
बागबजारको त्यो दिन
हामी चार जना थियौं । दिनमा ३ पटक खान्थ्यौँ । ५ हजारको ड्रग्सले तीन पटक खान पुग्थ्यो । बिहान ९ बजे, दिउँसो ३ बजे र रातको ९ बजे ड्रग्स लिन्थ्यौँ । बिहान ड्रग्स खान हिँडेको म बेलुकी नखाइकन घर पुग्दिनथेँ । जहाँ पुलिसले देख्दैन जस्तो लाग्थ्यो, त्यहीँ बसेर खान्थ्यौँ ।
त्यो दिन ड्रग्स ल्याउने साथी र मसहित अरु बागबजारको भित्री गल्लीमा थियौँ । ड्रग्स ( खैरो हेरोइन) भर्खर आइपुगेको थियो । मसँग दिनभरिलाई पुग्ने गरी हातभरि ड्रग्स थियो । हामी खान ठिक्क मात्र परेका थियौँ, तीन जना मान्छे आए । साथीजस्तै व्यवहार गरे ।
हामीले उनीहरु पनि ड्रगिस्ट नै होलान् भनेर सोच्यौँ । उनीहरुले एकैछिन गाडीमा बानेश्वर जाऊँ न भने । हामीले हाम्रो बाइक पार्किङ गर्यौँ र उनीहरुको गाडी चढेर गयौँ । अनि पो थाहा भो– ती त पुलिस रहेछन् ! हामी त पक्राउ परेछौँ !
त्यो बेलामा ड्रग्स लिन थालेको दुई वर्ष जति भएको थियो । एकचोटि पनि प्रहरीले फेला पारेको थिएन । प्रहरीले पक्राउ गर्ला भन्ने पनि लाग्दैनथ्यो तर पक्राउ परियो ।
रोएरै बित्यो दुई वर्ष
जेल धेरैको लागि भयानक कष्टकर ठाउँ हो । म २४ वर्षमा नै जेल परेकी, मेरा लागि पनि कम्ती कष्ट भएन । अरु किशोर उमेरमा लागुऔषधमा फँस्छन् । मेरो केसमा त त्यो पनि हैन । अरु सुध्रने बेलामा म बिग्रिन पुगेँ ।
फुक्काफाल भएर, जति भन्यो त्यति पैसा बुबाबाट लिएर हिँडेकी म एक्कासि जेल परेँ । कष्ट हुने नै भयो । परिवारको सदस्यको भन्दा पनि ड्रग्सकै याद आउँथ्यो । आफूले आफैँलाई भुत्ल्याएँ, कोपरेँ, चिथोरेँ पनि । मेरो शरीर र अनुहारभरि घाउ नै घाउ भयो, आफैँले चिथोर्दा । सामान्य अवस्थामा फर्कन एक वर्ष लाग्यो ।
एक वर्षसम्म ड्रग्स लिन नपाएर रोएँ । शरीरबाट ड्रग्सको असर झरेपछि बल्ल परिवारको याद आउन थाल्यो । अर्को एक वर्ष परिवारका सदस्य सम्झेर रोएँ । दुई वर्ष जेलमा पूरै रोएरै बित्यो ।
जे पर्नु अगाडि नै आमा भइसकेकी थिएँ, छोरी त्यो बेला तीन वर्षकी मात्र थिई । छोरी पेटमा भएकै बेला पनि मैले ड्रग्स खान छाडिनँ । अहिले मलाई ड्रग्सको कारण भएको एलर्जी उसलाई पनि हुन्छ । अहिले ऊ ११ वर्षकी भई । अहिलेसम्म मलाई मामु भनेर बोलाएकी छैन । जेलमा अरुका छोराछोरी आए भने हात समाउँछन्, छुट्टिनु पर्यो भने रुन्छन् तर मेरी छोरी हात समाउन त के, बोल्दा पनि बोल्दिन । सोधेको कुरा मात्रै भन्छे । मैले समाएर बस्न खोजे पर भाग्छे ।
छोरी जन्मेपछि आफ्नै दुध खुवाइनँ । अहिले अरुले मायाले बच्चालाई दुध खुवाएको देख्दा मुटु बटारिन्छ । त्यो दृश्य हेर्नै गाह्रो हुन्छ ।
जेल परेको २ वर्षसम्म छोरीको मुख पनि हेर्न पाइनँ । म पनि कसैकी आमा हुँ भन्ने होस खुलेपछि भने असैह्य भयो । खाना कसले खुवायो होला ? लडी कि ? केही भयो कि भन्ने याद आइरहने, मन आत्तिरहने गथ्र्यो तर आत्तिएर के गर्नु ? खुरुरु दौडेर भेट्न जान पाउने भए पो !
ऊ ७ वर्षकी हुँदासम्म पनि म उसकी आमा हुँ भन्ने पत्तो पाएकी थिइन । उसलाई आमा भनेर चिनाइयो तर आमा भनेर बोलाउन सकेकी छैन अझै । एउटी आमालाई आफ्नो सन्तानले नचिन्दा, आमा भनेर नबोलाउँदा कस्तो हुन्छ ? मन भित्रभित्रै हुँडलिन्छ । उसका लागि मेरा बाबा नै उसका बाबा, मेरी आमा नै उसकी आमा । मनमा लाग्छ, छोरीले आमा भनेर बोलाइदिओस् तर बोलाउँदिन ।
ऊ सानी छँदा मैले एक गाँस भात पनि खुवाइनँ । जहिले ड्रग्समा झुम्मिएर बसेँ । कठै, छोरीले कसरी पो आफ्नी आमा हो भन्ने फिल गरोस् ! सायद म जेल नपरेको भए छोरीको यत्ति माया पनि लाग्दैनथ्यो होला !
म जेलमा, बाबा डिप्रेसनमा
जब म ड्रग्समा लठ्ठ थिएँ, त्यतिबेला मेरो संसार नै यही हो भन्ने लाग्थ्यो । परिवारको बाल मतलब लाग्थेन । संसारमा म एक्लै हुँ भन्ने फिल हुन्थ्यो । जब जेल परेँ, बाबा डिप्रेसनमा जानुभएछ । मैले गर्दा व्यवसाय पनि चौपट भयो, बाबाको स्वास्थ्य पनि धरापमा पर्यो ।
बाबाले डिप्रेसनको औषधी खानु प¥यो । एक वर्षसम्म त मलाई भेट्न आउन पनि सक्नुभएन । उहाँलाई रिकभर हुन नै एक वर्ष लाग्यो । जब बाबा भेट्न आउनुभयो, त्यो पहिलो दिन बाउछोरीको बोलचालै भएन । रुवावासी चल्यो । न त बाबा बोल्न सक्ने, न म ।
‘म कामबाट बेलुकी थाकेर आउँदा घरमा सबैजना बस्नु है मेरो आधि थकाइ मर्छ’ भन्नुहुन्थ्यो बाबाले । उहाँको त्यो भनाइ जेलमा धेरै सम्झिएँ । अहिले पनि सम्झिन्छु । बाबा कामबाट आउनुभयो होला, म त्यहाँ छैन भन्ने लागिरहन्छ । अहिले पनि बाबा १÷२ दिन बिराएर आइरहनुहुन्छ भेट्न । आएको बेलामा नरोएको दिनै हुन्न । ८ वर्ष भयो बाबा भेट्न आउन थालेको । नरोएको एक दिन पनि छैन । यस्तो देख्दा मलाई कस्तो हुन्छ होला ?
(उनी फेरि रोकिइन् )
मामु १५ दिनमा आउनुहुन्छ ।
आखिर पुराना कुरा सम्झेर नै के नै हुन्छ र ? अहिले आफूले आफैँलाई सम्हालेकी छु ।
जेल नपरेकी भए मरिसक्थेँ
( महिला कारागार )
मैले ड्रग्सको मात्रा बढाउँदै लगेकी थिएँ । म आफ्नै सुरमा ड्रग्समा फँसेकी थिएँ । ड्रग्स लिन छोड्न सक्ने थिइनँ । कहिलेकाहीँ धेरै जेल सजाय भयो कि भन्ने लाग्छ तर त्यत्ति धेरै दुःखी पनि छैन, खुसी नै छु ।
अहिले सुन्छु, मसँगै ड्रग्स खाने कति साथी मरिसके, कति ठूलो रोग लागेर बल्लतल्ल बाँचेका छन् । म पनि जेल नपरेको भए अहिले यसरी कुरा गर्न जीवित हुने नै थिइनँ । म मरिसकेकी हुन्थेँ ।
म मरेको भए न बाबालाई नै बुझ्न पाउँथेँ, न आमा हुनुको अर्थ अनुभव हुन्थ्यो ।
धन्न जेल परेँ र त कम्तीमा भित्रै बसेर भए पनि संसार हेर्न पाएकी छु ।
यसका लागि भगवान्लाई पटक–पटक धन्यवाद दिने गरेकी छु, ‘जेल त पार्यौँ तर कम्तीमा संसार हेर्न जीवित त राख्यौ !
सुक्रबार साप्ताहिक बाट
सृष्टिलाई देखाउने रहर
रेशम चौधरीलाई न्याय दिलाउँछौँ : स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन रुपन्देही
दुर्घटनाअघि मन्त्री रवीन्द्र र पाथिभराका पुजारीको त्यो संवाद